Leonardo “Mbappe ma ahan caruur” - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Leonardo “Mbappe ma ahan caruur”
Leonardo “Mbappe ma ahan caruur”
Agaasimaha Isboortiga Paris Saint-Germain Leonardo ayaa difaacay Kylian Mbappe ka dib markii uu bedelay macallinkiisa Thomas Tuchel, isagoo ku adkeystay in weeraryahanka uusan aheyn cunug yar oo aan lo bahneyn.
Mbappe wuxuu si gaar ah su’aal u galiyay go’aanka Tuchel ee ahaa inuu badalo 68 daqiiqo iyadoo PSG ay durbaba shan gool ku hogaamineyso Montpellier.
Xiddigii hore ee xulka France Christophe Dugarry ayaa dhaleeceeyay falcelinta da ‘yarkaan wuxuuna sheegay inuu lumiyay ixtiraamka macalinkiisa.
Sikastaba, Mbappe ayaa tan iyo markaas ciyaray 90-kii daqiiqo kastaa, Leonardo ayaana hoos u dhigay dhacdadaa iyadoo xiddiga lala xiriirinayo Real Madrid.
“Waxaan maqlay waxyaabo ku saabsan Mbappe. shaqsiyadiisa waxba iigama dhigeyso aniga,waan ogahay qofka uu yahay” ayuu u sheegay Canal +
“Haddii ciyaaryahan uu ka baxo garoonka, oo uu la hadlo tababaraha, waa qalad. Waan kahadli doonaa arintaan oo aan xallin doonaa arintaan. Laakiin inaan dhaho wuxuu qaldanaa ma ahan wax sax ah?
“Waa nin la jecel yahay, qof go’an adag leh, iyo ciyaaryahan fantastik ah.”
Mbappe ayaa sameystay iskaashi uu la leeyahay Neymar xilli ciyaareedkan, iyagoo wadaagay 38 gool tartamada oo dhan.
Wuxuu Leonardo su’aal ka keenay qalqal ka jirta kooxda PSG, oo 21 kulan aan laga badinin tartamada oo dhan.
“Afarta ciyaartoy ee dunida ugu sareysa, waa 35 sano, 32 jir kale labada kalena waa 28 iyo 21 jir,” ayuu yiri Leonardo.
“Labadaa ugu yar ayaan heysanaa anagga sidas darted maxaa diidayaa inaan sameyso wax kastaa.
Previous articleMadaxweynaha Jubbaland oo dib ugu soo laabtey Kismaayo
Next articleLiverpool oo go’aansatay inay u dhaqaaqdo Timo Werner